Al Shabaab oo weerartey Xeebta Liido (Banadir beach) iyo Ninkii isqarxiyey oo dhaawac ah oo la qabtey – Saraar Media
Home›All War›Al Shabaab oo weerartey Xeebta Liido (Banadir beach) iyo Ninkii isqarxiyey oo dhaawac ah oo la qabtey
Al Shabaab oo weerartey Xeebta Liido (Banadir beach) iyo Ninkii isqarxiyey oo dhaawac ah oo la qabtey
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka heleyno Xeebta Liido ayaa sheegaya in Dableey lagu Qiyaasay Illaa Saddex ay ka dhex Dagaalamayaan Maqaayadda Banaadir Beach oo ku taala xeebta Liido.
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa ku Hareereysan Maqaayadda ay ku jiraan Dableeyda sida ay noo Xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Hay’addaha Ammaanka.
Maqaayadda Banaadir Beach Ee Weerarka lagu qaaday ayaa la sheegay in Dadkii ku sugnaa intooda badan ay ka Carareen,iyadoo ay jiraan Dad weli ku dhex jira Maqaayadda.
Taliyaha Nabadsugidda Gobalka Banaadir Cabdi Fareey ayaa sheegay in Nolasha ay ku qabteen mid kamid ah Maleeshiyaadkii weeraray Maqaayadda Banaadir Beach,islamarkaana hada su’aalo la weydiinayo.
Taliye Cabdi Fareey oo lahadlay SONNA ayaa Sheegay in Ninka laqabtay uu ahaa ninkii Kaxeynayay Gaadhiga Qaraxyada laga soo buuxiyay ee lagu weeraray Makhaayadda Banaadir Beech, kaas oo laga dhex qabtay isagoo dhaawac ah burburka Gaariga ku Qarxay Albaabka hore ee Makhaayadda.
“Dhaawac ayaan ku qabanay hadda Cisbitaalka ayaan ku heynaa, waa ninkii gaadhiga qarxay waday, waan daweyneynaa Su,aalana waan weydiineynaa”
Taliyaha Ayaa hadalkiisa ku daray in wali howlgalku socdo, isla markaana wali aan lakala Caddeyn karin qasaaraha ka dhashay weerarkaasi oo iskugu jiray Qaraxyo iyo rasaas isla socday.
Ciidamada Amaanka ayaa in ka badan 20 qof oo shacab ah soo badbaadiyay ku waa soo ku xayirnaa gudaha Maqaayadda ,Walina Howlgalka wuu socdaa.
Daawo: Kulan Dhex Maray Dawlada, Xisbiyada Mucaaradka ...
Many non-refugee Kenyans have registered as refugees ...
Madaxweynaha Kenya oo madaxweynaha Soomaaliya kala xiriiray arimaha qaadka